Shina nitady ny hanala olana momba ny fanirian-daza amin'ny manan-karena mineraly-Antarctica ny Alatsinainy, tamin'ny manam-pahefana nanao hoe: Beijing tsy misy drafitra hanombohana fitrandrahana harena ankibon'ny tany ao amin'ny kaontinanta lehibe. Shina asa fanitarana amin'ny tendrony faritra dia toerana manan-danja toy ny teboka Beijing Tompon'ny maro ny fivoriana fanao isan-taona ny Tendrontany Atsimo T ... Lire la suite »
Arzantina manam-pahefana, ny indostria mpilalao sy ny sendika no andrasana hanao sonia tamin'ity herinandro ity nandrasana ela federaly fifanarahana harena ankibon'ny tany izay misy lalàna unifies manerana ny firenena, izay tafiditra ao ezaka mitohy mba hitsambikina-hanomboka ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatra. Ny firenena, indray mandeha ny harena ankibon'ny tany amin'ny toerana tena mpampiasa vola, ha ... Lire la suite »
Izany liftoff! Shina-nanorina fiaramanidina maka ny lanitra
Nandrasana hatry ny ela homegrown Shina mpandeha fiaramanidina C919 nampisondrotra ny tovovavy eny amin'ny fiaramanidina amin'ny Shanghai Pudong International Airport tamin'ny Zoma. Manodidina ny 3000 ny olona nanatri-maso ny fotoana manan-tantara ny kambana-maotera, mpitovo-bitany Ilany aiza ny fiaramanidina. Ny C919 tetikasa natomboka tamin'ny 2006. roa ianareo ... Lire la suite »
SA asa fitrandrahana hevitra manintona 131 fandraisana anjara avy amin'ny tantsaha, orinasa mpitrandraka sy ny vondrona
Tompon-tany sy ny fitrandrahana orinasa 131 no eo vondrona handry fandraisana anjara milaza ny raharaha amin'izao fotoana izao noho ny famerenana ny harena ankibon'ny tany Aostralia Atsimo asa. Mpitondra tenin'ny harena an-kibon'ny sy ny minisitry ny angovo Tom Koutsantonis hoe "indray mandeha no fandraisana anjara mivaingana" izy ireo, fa ho vahoaka ... Lire la suite »
Fitrandrahana ny lalàna: be loatra, tara loatra
Post fotoana: Apr-27-2017
Ny lava-nanohitra fanitsiana ny lalàna harena ankibon'ny tany amin'izao fotoana izao dia lasa hatrany miditra amin'ny fahadisoana ny fomba arahina sy ny minitra farany fanampiny izay hanokatra ny lalam-panorenana azy ireo zava-tsarotra. Na dia ny Mineral & Petroleum Resources Development Act (MPRDA) Fanitsiana Bill no nandalo ny ... Lire la suite »
Modern harena ankibon'ny tany sy ny Teknolojia Herinandron'ny eny kicks in Sudbury
Nandritra ny fotoana, rehefa ny harena ankibon'ny tany izay azon'ny orinasa dia ny ranomasina fiovana eo amin'ny teknolojia sy ny zava-baovao, dia tsy mbola nisy zava-dehibe ny anjara ny tanora sy ny fanabeazana azy ireo ny momba ny fahafahana misy eo amin'ny sehatra. Izany no hafatra tao amin'ny 21 Aprily nandritra ny raharaha fanao isan-taona luncheon ny fanombohana Mode ... Lire la suite »
Zavatra polisy mandeha mitempo ao amin'ny Great Wall
Post fotoana: Apr-25-2017
Valo polisy Shinoa handeha amin'ny fisafoana tany Italia tamin'ny fiandohan'ny Jona mba hanampiana ny Zavatra mitovy miaro mpizaha tany Sinoa, ny mpiasam-panjakana ambony polisy hoy ny Alatsinainy. Ary ny mpiandry raharaha, ary nahay firenena voafantina amin'ny teny italiana, dia hisafo Toerana mahafinaritra pentina tany Roma, Milan, sy Naples any Florence ... Lire la suite »
Gunnedah olona mandresy NSW harena ankibon'ny tany Young Achiever Award
Post fotoana: Apr-20-2017
Ny Murray Gunnedah O'Keefe dia "chuffed" taorian'ny voafidy handray ny harena ankibon'ny tany Young NSW Achiever Award. Ny Gunnedah Shire mpanolotsaina sy Whitehaven Coal mpiasa nambara ho toy ny mpandresy tao amin'ny NSW harena ankibon'ny tany sy ny Indostria Suppliers 'Awards amin'ny Parlemanta NSW House tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Iray amin'ireo roa ... Lire la suite »
Aostralia greenlights Rio Tinto ny $ 2.45bn fivarotana ny toeram-pitrandrahana arintany tany Yancoal
Post fotoana: Apr-14-2017
Aostraliana manam-pahefana no nanome Yancoal (ASX: YAL), ny sampan'ny ao Shina Yanzhou Arintany harena ankibon'ny tany, ny maitso fahazavana mba handeha mialoha sy ny nanomana $ 2.45 lavitrisa fahazoana Rio Tinto ny (ASX, Lon: Río) mafana arintany fananan'ny ao amin'ny Hunter Valley. Ny Foreign Investment Review Board neken'ny ny fifanarahana, ... Lire la suite »
Fiore Exploration ny hanomboka fanentanana ary atsofony ao Shily
Fiore Exploration CEO, Tim Warman, nanambara ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra ary atsofony ao amin'ny orinasa Pampas El Peñón volamena tetikasa any Chile, izay mandrakotra ny tany ao amin 'ny tontolo iainana araka ny Yamana haibolantany ny flagship El Peñón ahy. Warman niteny tamin'i MINING.com tamin'ny volana tamin'ny 2017 Prosp ... Lire la suite »